Guqula i-TrackPad yakho yeMacBook ibe yiphedi yamaqhosha enamanani anokufikelela | Ndisuka mac
Siphela namhlanje ngokucinga kwakhona ukubakho kweTrackPad kwii-laptops ze-Apple. Njengoko sele ubonile, iilaptops zeApple zinebhodi yezitshixo engenayo indawo yekhiphedi yamanani, ke Ukuba usebenzisa kakhulu olu hlobo lwebhodi yezitshixo, kuya kufuneka uthenge isixhobo sangaphandle esiza kusebenza njengalo.
Ewe, ukunqanda ukuphatha izinto ezininzi, Sinikela kuwe i-Numbs, uhlobo lweglasi enomsindo enamathela kumphezulu weTrackPad ye these ukuze ube nakho ukufumana iphedi yamaqhosha enani.
Le nto inceda kakhulu, ilula kakhulu kwaye kukuba kwimizuzu nje emithathu unayo yonke into ephantsi kolawulo. Ukusebenza kwayo kufuneka unamathele kwiglasi enobushushu ngaphezulu kweTrackPad emva koko uye kwiwebhusayithi yomyili wayo kunye khuphela usetyenziso ekufuneka silufakile kwi-MacBook kwaye uya kuba nakho ukuyisebenzisa ngaphandle kwengxaki.
Ngokucinezela nje kwindawo ethile yeTrackPad screen-eprintwe ngeqhosha lokufowuna kwibhodi yezitshixo, isicelo siqala kwaye silungiselele umphezulu weTrackPad ukuze sikwazi ukufaka amanani ngokucinezela kwimimandla eyahlukeneyo.
Yazisa kwakhona ukuba umphezulu unokuqwalaselwa ukuze sikwazi ukongeza imisebenzi emitsha kwinto eveliswa ngumenzi ngokwakhe. Unokuba nolwazi oluthe kratya malunga nayo kwividiyo ye-Unbox Therapy esikubonisa yona nakwiwebhusayithi yomenzi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Iikhompyuter zeMac » Guqula i-TrackPad yakho yeMacBook ibe yikhiphedi enamanani ngale nto ifumanekayo
I-Apple TV sele ihlaziye isicelo sayo seMisitho yeWWDC 2017